Mahatsapa lohataona ary mihaona amin'ny fiainana mahafinaritra-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Mahatsapa ny lohataona ary mihaona amin'ny fiainana mahafinaritra
Fotoana: 2020-08-27 Hits: 31
Ny volana aprily dia vanim-potoana volamena amin'ny lohataona, ary feno voninkazo izao tontolo izao. Ny fonay very ela dia efa maintso maintso, ny hanitry ny voninkazo, ny hanitry ny tany, manokatra hatrany ny fontsika mahamamo.
Ny volana aprily koa dia vanim-potoana volamena amin'ny fizahan-tany, ary miverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra. Ny rivotra amin'ny maraina dia madio sy mahafinaritra; manafana ny fon'ny olona ny masoandro amin'ny mitataovovonana; ny rivotra amin'ny alina dia mamelombelona sy mangatsiaka.
Ny orana amin'ny lohataona dia tsara sy malefaka. Mamelona ny tany moramora izy io. Amin'ny maraina, somary mangatsiaka ny rivotra, manome fahatsapana tena vaovao izy. Ny rivotra mitsoka amin'ny lohataona dia mamoha ary mamoha ny zava-drehetra. Maitso ny tendrony, maitso ny tany, ary maitso ny lampihazon'ireo trano avo. Mando ny orana rehefa mitsoka ny rivotra. Ny voninkazo eny an-tendrombohitra sy ny lemaka dia nanokatra ny masony, iray, roa, iray clump, roa clumps… mifandray amin'ny ampahany ary mifangaro ao amin'ny ranomasina misy voninkazo.
Hey, mahafinaritra tokoa ny lohataona, tokony hahatsapa ny natiora isika aorian'ny asantsika, hahatsapa ny famelombelona entin'ny lohataona, avelao ny rivotra mahavariana mamelombelona ny fahasosoranay, avelao ny orana lohataona haka ny fahasorenantsika. Andao isika handray asa mavitrika kokoa sy fiainana feno fanantenana.
Previous: Manasa anao hitsidika ny orinasa i SOUSOUL
Next: Fetin'ny mpiasa